★မြန်မာ့အလင်း★: လေးစားရင် ပြားပေးပါ
မွတ်ဆလင်ဘာသာကို လေးစားကြပါ။ သူများဘာသာဆိုတာ လေးစားရပါတယ်။ နောက်ပြီး မွတ်ဆလင်ကို နယ်နယ်ရရ မထင်ပါနဲ့။ အနောက်ဖက်နဲ့ အမှီတိုးတက်နေပါတယ်။ ကြည့်လေ. . . အနောက်ဖက်မှာ Debate တွေခေတ်စားလာသလို အားကျမခံ သူတို့လည်း Debate လိုက် လုပ်တာပေါ့။ မွတ်ဆလင်ကို လျှော့မတွက်ပါနဲ့။ Debate ကိုလည်း မွတ်ဆလင်တွေ အသိဥာဏ်တိုးပွားစေရေးကို မျှော်ကိုးပြီး တီဗီကနေထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။ Debate ခေါင်းစဉ်ကတော့. . . . ကမ္ဘာကြီးဟာ ပြားလား? လုံးလား?ဆိုပဲ။ အဲလို အင်မတန် ခက်ခဲနက်နဲ့တဲ့ ကိစ္စကို မွတ်ဆလင် နှစ်ကောင် ငြင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ (မုဒိမ်းကျင့်ခံထားရတဲ့ ကုလားတွေလည်း သူတို့ သခင်အာရပ်တွေ အတွက် ဂုဏ်ယူ အားကျသင့်ပါတယ်) တစ်ဖက်ကလဲ သိပ္ပံစာအုပ်ကြီး ကိုင်ပြီးပြောဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်ဖက်ကလဲ Quran ကျမ်းကြီးနဲ့ပေါ့။ သြော်…. 2009မှာ မွတ်ဆလင်တွေ ဘ၀က ကမ္ဘာကြီးက လုံးလား ပြားလား ငြင်းခုံနေရတဲ့အဆင့်ဆိုပဲ ……… မရယ်နဲ့နော် (ဟား . . . . ဟား . . . . ဟား . . . . ဟား . . . . ဟား . . . . ဟား . . . . ) တကယ်ကို ငကြောင်တွေ
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 10:45 PM